Tracx: mahazoa hevi-baovao, hitombo ny fifamatorana, ary hamaritana ny fiantraikany amin'ny orinasanao sosialy | Martech Zone
Tracx: Mahazoa hevi-baovao, hitombo ny fifamatorana, ary hamaritana ny fiantraikany amin'ny orinasanao sosialy
Asabotsy Jolay 30, 2016 Douglas Karr
Ireo orinasam-pandraharahana dia manohy mamoha ny mety ho an'ny media sosialy. Fanaraha-maso laza, fangatahana valin-kafatra ho an'ny mpanjifa, fanomezana marketing am-bava, fampiroboroboana ny atiny sy tolotra, fampianarana sy fikolokoloana ny vina sy mpanjifa. Ny tambajotra sosialy dia manolotra azy rehetra - fahazoana, upsell ary fitazomana.
Ny hafainganam-pandehan'ny fampahalalana sy ny lojika ampiasaina amin'ny fizarana paikady sosialy ao amin'ny orinasa dia mitaky sehatra iray hanaraha-maso, handrefesana ary hanatanterahana ny paikadin'ny media sosialy.
Ny vahaolana Tracx dia manadihady sy manadio tahirin-kevitra ara-jeografika, demografika ary ara-psikolojika manerana ny tranonkala sosialy mba hanomezana hevi-dalina ho an'ny mpanjifa, mpifaninana ary mpiorina. Izy io avy eo no mahatonga ireo fomba fijery ireo ho azo tanterahina amin'ny alàlan'ny motera sosialy momba ny tolo-kevitra ara-tsosialy mifototra amin'ny zava-misy, ahafahan'ny fifanakalozana marani-tsaina manome valiny ara-barotra misy dikany.
Tracx mamaky an'ity ho lasa singa lehibe telo - fahitana, firosoana ary fandrefesana:
fijery - ahafahan'ny orinasa mahita, mikendry ary manararaotra ireo influencer. Ny Insights dia mamela ny orinasa hamantatra ny mpijery ara-jeografika azy ireo, mamantatra ireo toerana mafana ary mahazo granular amin'ny tanjona kendrena any an-toerana. Ary mazava ho azy, mamela ny fihainoana an-tsoratra sy an-tsary ary ny fandalinana amin'ny fotoana tena izy.
Engagement - Mahita sy mitantana atiny matanjaka, miara-miasa amin'ny fandaminana, ary manorata fanavaozam-baovao sy lahatsoratra mifandraika sy mifantoka amin'izany.
Fandrefesana - Tantano ary araraoty ny fampielezana haino aman-jery sosialy anao, fantaro ireo fantsom-piaraha-miasa efa nahavita be, ampitahao ny valiny amin'ny fifaninanana ataonao, araho ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola, ary refeso ary tantano ireo mari-pahaizana momba ny zava-bita anatiny.
Mangataha Demo Tracx!
Tags: orinasa sosialytracx